- Page 89 of 182 - Ayyaantuu Online
Ummanni keenya hedduun haala ammaa irratti gaaffii hedduu kaasaa jiru. Keessayyuu, ejjannoon ABO maal akka ta’e beekuuf fedhiin jiru guddaa dha. ABOn akkuma irra deddeebi’ee ibsaa jiru, bifa kamiinuu dantaa Oromoo dabarsee hin kennu. Kaayyoon Oromoo akka milkaa’u jabeessee hojjata.… Read More »
ONN: Ajjeechaa Dr. Abiy Ahmed Irraatii Aggaamamee Ture Irratii Qophii Addaa, Waxabajjii 28, 2018 ONN: Waxabajji 28,2018-Mandii =========== Konkolaataan seeraan ala Ixaana fe’ee adeemu Mandii keessatti tohannoo jala kan ture gubboodhaan hiikame. Gabaasni nuti arganne akka jedhutti “konkolaataan lakkoofsi isaa… Read More »
Uuummata nagaa irratti lola bananii nagaa biyyaa booressun amala bineensummaa qaban calaqisiisuudha Qeerroo Bilisummaa Oromoo Finfinnee Oromiyaa, Waxabajji 27, 2018 (Qeerroo) — Sirni Mootummaa abbaa irree EPRDF/Wayyanee gochoota jallataa uummatarratti dalaguu itti fufsiisuun gochanni tibba kana uummata nagaa irratti raawwataa… Read More »